Mac faq, casharro iyo buugag loogu talagalay Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 3)
Nidaamyada cusbooneysiinta ayaa beddelay meeshooda iyadoo la sii daayay macOS Mojave lagumana heli karo Mac App Store.
Sida loo kiciyo qaabka mugdiga ah ee macOS Mojave
Kadib dhowr sano oo sugitaan ah, qaabka mugdiga ah ee muddada dheer la sugayay ayaa hadda laga heli karaa nooca cusub ee macOS ee kombiyuutarada Apple: Mojave. Waxaan ku tusaynaa sida loo kiciyo.
Haddii aad rabto inaad dib u cusbooneysiiso barnaamijyada dhinac saddexaad ee ku saabsan Mac-gaaga macOS Mojave, waa tan sida loo sameeyo.
Muxuu Wakiilka Sawirku u cunaa ilo badan oo nidaam ah?
Muxuu Wakiilka Sawirku u cunaa ilo badan oo nidaam ah? Waxaan kuu sharaxeynaa sababta ay u dhacdo iyo fursadaha aad leedahay si aad uga fogaato.
Sida loo isticmaalo Mac-duuggaagii hore u-habeyn qaab-kaabsool ah
Thanks to tayada kombiyuutarada Mac, waxaan u isticmaali karnaa waqti dheer. In kasta oo aysan ku jirin safka hore ee dagaalka, Mac leh dhowr sano oo ah Sida loo isticmaalo Mac-duuggaagii hore ee loogu talagalay qaababka kaabsalka ah ee loo yaqaan 'Capsule-style', iyadoo la sameynayo nuqullo nuqul ah iyada oo aan la isku xirin wax disk ah si aad u Mac
Sida loo daro ama looga saaro barnaamijyada si toos ah ugu bilaabmaya bilawga macOS
Tani waa mid ka mid ah casharradan yar yar ee waxtarka u yeelan doona gaar ahaan dadka isticmaala ee haysta kombuyuutarradii hore ee Mac ...
U diyaarso taabashada 'Touch Bar' ee Safari macOS
Maalmo ka hor waxaan kuu sheegnay sida aad ugu hagaajin karto Safar toolbar macOS si aad uga dhigto sida ku xusan baahiyaheena isla markaana u habeeya Barta taabashada ee Safari ee macOS, si aad u hesho howlaha aad u isticmaasho inta ugu badan ee toos looga heli karo kumbuyuutarka.
Ku samee khaanadda Safari ee macOS
Codsiyada MacOS laguma tilmaamo tiro badan oo habeyn ah, laakiin xitaa sidaas oo ay tahay, waxay leeyihiin dhammaan kuwa lagama maarmaanka ah kuwanna waa Baro sida loo qaabeeyo toolbar Safari ee macOS, oo leh dhowr tallaabo oo fudud, si loogu waafajiyo dhadhankaaga
Tani waa sida habka maalinlaha loogu shaqeysiiyo Boostada, marka aan leenahay qaab mugdi ah oo ku shaqeeya macOS Mojave
Toddobaadyo ayaa ka hartay Apple si ay ugu diyaariso dadka isticmaala macOS 10.14 oo ku socota magaca macOS Mojave. Waxa ugu muhiimsani waa qaabka Sidan ayaa hab-maalmeedka looga hawlgeliyaa Boosta, markii aan shidnay habka mugdiga ah ee macOS Mojave, kaas oo umuuqda mid aad loogula talinayo akhriska iyo qorista.
Sida si fudud loogu beddelo hadafkaaga dhaqdhaqaaqa maalin kasta ee Apple Watch
Mid ka mid ah xulashooyinka inta badan loo isticmaalo Apple Watch shaki la'aan in loo isticmaalo saacad ahaan ...
IMac tee ayaa lagu taliyaa ardayda?
IMac tee ayaa lagu taliyaa ardayda? Waxay kuxirantahay barashadaada, laakiin waxaan kuu sharaxeynaa in iMac ay ku haboontahay baahidaada
Sida loo kiciyo Siri adoon dhihin "Hey Siri" oo leh "Lift to talk" cusub ee muuqaalka watchOS 5 beta
Cashar ku saabsan sida loo dhaqaajiyo Siri adigoon dhihin "Hey Siri" oo leh shaqada cusub "Raise To Speak" ee beta ee watchOS 5, helitaanka wax soo saar
Sida loo beddelo galka dajinta aasaasiga ah ee Safari
Haddii aan rabno inaan bedelno galka caadiga ah ee ay Safari iyo daalacayaasha kale ay ka soo dejistaan ​​internetka waxyaabaha ay ka kooban yihiin, qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Sidee loo eegaa erayga sirta ah ee lagu kaydiyay macOS Keychain
Ma dooneysaa inaad sameyso muuqaal sir ah oo gaar ah oo aad ku keydiso keychain macOS? Halkan waxaan ku tusaynaa sida ay tahay inaad u sameyso
Beddel arjiga asalka ah ee loo qoondeeyey inuu furo faylka macOS
Casharro noo sheegaya arjiga aad adigu u qoondeysay asal ahaan si aad ugu furto faylka macOS, iyo sida aan ugu sii soconno isbedelka
Sida loo soo bandhigo hawlgallada aan ku qabannay xisaabiyaha shaashadda
Xisaabiyaha macOS ee waddanka wuxuu noo oggolaanayaa inaan tusno taariikhda hawlgallada sidii inay ahaan lahaayeen xisaabiyaha waraaqaha.
Sida loo helo saameynta sawirada MacOS Mojave ee Mac kasta
Ma dooneysaa inaad abuurto saameynta firfircoonida macOS-ga Mojave adigoon ku dhejineynin nooc beta ah Mac-gaaga? Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida
macOS Mojave wuxuu noo ogolaanayaa inaan wadaagno ereyada sirta ah ee loo maro AirDrop
macOS Mojave wuxuu noo ogolaanayaa inaan si fudud oo fudud u dirno ereyada sirta ah ee loo soo mariyo AirDrop qalabka IOS.
IOS 12 ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku darto khariidadaha dhinac saddexaad ee CarPlay: Khariidadaha Google ama Waze, tusaale ahaan. Waxaan ku tusineynaa sida loogu daro.
Sida loo kiciyo fariimaha kujira iCloud
Haddii aad rabto inaad kudhaqaajiso shaqada isdhaafsiga farriinta cusub illaa iCloud, markaa waxaan ku tusi doonaa sida aan u sameyn karno.
macOS High Sierra wuxuu leeyahay qaab mugdi ah oo la mid ah macOS 10.14
Tutorial si aad u dhaqaajiso nus mugdi ah macOS High Sierra oo u arag sida uu muuqaalkani u eg yahay, illaa laga sii daayo macOS 10.14
Baro sida loogu soo dejisto kalandarka Koobka Adduunka kubbadda cagta Mac-gaaga
Ku dar jadwalka Koobka Adduunka kalandarka. Si tan loo sameeyo, gal bogga jadwalka kalandarka isla markaana ku soo biir jadwalkaan bogga aad rabto.
Sida loo hubiyo heerka batteriga ee AirPods ee ku yaal Mac
Haddii aad rabto inaad ogaato heerka batteriga ee AirPods uu marayo Mac, hoosta waxaan ku tusaynaa sida aan u sameyn karno adigoon adeegsan iPhone ama iPad.
Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo dhammaan sawirrada ku kaydsan Sawirada ku yaal macOS
Ma rabtaa inaad marin toos ah oo dhakhso leh u hesho dhammaan sawirrada ay qabato barnaamijka macOS Photos app? Waxaan kuu sheegi doonaa sida meelahan loogu meeleeyo Raadiyaha
Sida loo waafajiyo astaamaha kumbuyuutarrada kumbuyuutareedka si ayan mar dambe u qasnayn
Haddii aad ku daashay aragtida sida astaamaha kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka ah uusan u raacin amar iyo iswaafajin, qodobkan ayaa ku tusi doona sida aan u xallin karno dhibaatadan yar ee weyn.
Sida loo barnaamijyo Mac-gaaga si uu isu-shido ama u damiyo
Ma ogtahay inaad barnaamij ka dhigan karto bilowga otomaatiga ah ee Mac? Waxaad sidoo kale jadwal u sameyn kartaa hurdadooda. Oo halkan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo
Sida loo qiyaaso astaamaha desktop-ka ee macOS
Haddii aad had iyo jeer rabto inaad beddesho cabbirka astaamaha kumbuyuutarkaaga Mac, halkan waa sida loo sameeyo.
Hubi haddii aad hayso "mshelper" khayaanada 'macOS' waxaanan kuu sheegi doonnaa sida looga saaro
Waxaan ku baraynaa sida loo ogaado malwareerka mshelper oo looga tirtiro mac-gaaga dhowr ilbiriqsi gudahood.
Waxa la sameeyo haddii Mac-daada uusan aqoonsan waddo dibadda adag
Haddii Mac-gaagu uusan aqoonsanayn waddo adag oo dibadda ah ama xusuusta USB markaad isku xirto, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah sababaha suurtagalka ah iyo xalka dhammaantood
Sida loo dejiyo farshaxanka albamkayaga iTunes-ka sidii shaashadley
Haddii aad leedahay maktabad weyn oo iTunes ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad farshaxanka ugu adeegsato saxannadaada sidii shaashaddaada.
Sida loo ogaado markii aad sameysatey Aqoonsigaaga Apple
Ma rabtaa inaad ogaato goorta ay ahayd taariikhda abuurista Aqoonsigaaga Apple? Waxaan ku baraynaa inaad ka hesho adoo adeegsanaya iTunes iyo taariikhda wax iibsigaaga
Sida loo habeeyo xogta la soo bandhigay markii la abuurayo xiriir cusub
Haddii meelaha lagu soo bandhigo qaab ahaan markasta oo aan abuureyno xiriir cusub aysan ku filneyn, qodobkaan waxaan ku tusineynaa sida aan u ballaarin karno ama u yareyn karno tiradaas.
Sida loogu daro tirada usbuuca arjiga Kalandarka
Codsiga Kalandarka macOS wuxuu noo ogolaanayaa inaanu qaabeyno arjiga si uu noo tuso tirada usbuuca aan ku jirno
Ka hor-tag arjiga jadwalka in uusan na soo ogeysiin ciidaha iyo maalmaha dhalashada
Haddii aan ku daalnay helitaanka ogeysiisyada ku saabsan jadwalka dhalashada ama ciidaha, hoosta waxaan ku tusi doonaa sida loo demiyo labada kalandar.
Sida loo isticmaalo Siri-ka Mac-gaaga si ay wax soo saar badan u yeeshaan
Siri on Mac wuxuu noqon karaa aalad kaa caawinaysa maalin-ka-maalin ku saleysan. Waxaan ku siin doonaa qaar ka mid ah howlaha aad ku aamini karto kaaliyaha dalwaddii Apple
Sida looga hortago in Boosta ay soo dhigto sawirada fog ee emayllada sidaasna looga hor istaago inay na daba galaan
Thanks to ikhtiyaarka ay Mail noo diyaarisay, waxaan ka hortagi karnaa kuwa soo diraya emayllada inay ogaadaan haddii aan aqrinay emayladooda.
Sida loo tirtiro kalandarka macOS
Marka kalandarka uu noqdo mid aan la isticmaali karin, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah inaan ka saarno barnaamijkeena kalandarka.
Sida loo rogo shaashadda Mac-gaaga madow iyo caddaan
Ma u baahan tahay inaad la shaqeyso shaashadda Mac-da madow iyo caddaan? MacOS waxay leedahay muuqaal taxane ah oo kuu oggolaanaya inaad ku shaqeyso habkaas. Tan waxaa loogu talagalay dadka leh dhibaatooyinka aragga
Sida loo dhoofiyo qoraallada qaabka PDF
Sanadihii la soo dhaafay, Codsiga Qoraalada wuxuu noqday aalad aad u wanaagsan oo ay tahay inaan dhammaanteen tixgalino ...
Tani waa waxa aad ku sameyn karto barnaamijka macOS Switcher
Barnaamijka Switcher wuxuu socdaa marka macOS uu bilaabmo wuxuuna keenaa astaamo badan oo badan oo qarsoon marka lagu daro kala bedelka barnaamijyada
Ku xir Mac-gaaga adigoo adeegsanaya toobiye kumbuyuutar oo ku yaal macOS High Sierra
Way cadahay in nidaamka Mac-ga uu leeyahay ismaqal hufan iyo inuu yahay mid dareen leh, laakiin waxaa jira waqtiyo ...
Samee liis buuxa oo ah barnaamijyada aad ku rakibtay Mac-gaaga
Ma rabtaa liiska codsiyada lagu rakibay Mac-gaaga? Waxaan ku siin doonaa laba dariiqo. Labaduba iyagoo isticmaalaya Terminal. Midkoodna wuxuu noqon doonaa liis fudud iyo mid kale oo leh faahfaahin
Sida loo qiyaaso astaamaha dhinaceeda ee macOS
Haddii aad had iyo jeer rabto inaad beddesho cabbirka astaamaha ku yaal dhinac-gees, maqaalkan waxaan ku tusinaynaa sida ugu dhakhsaha badan ee wax loo qaban karo iyo qaab aad u fudud.
Sida loo demiyo animations iyo hufnaanta macOS High Sierra
Haddii aan joojino animations-ka iyo hufnaanta kombiyuutarkeena ay maamusho macOS High Sierra, hawlgalkeedu wuu sii dhakhso badan yahay.
Sida loo kiciyo Meelaha la Dirayo ee Akoonada aan ahayn iCloud
Ma dooneysaa inaad ku isticmaasho adeegga Drop Mail ee akoonnada aan ahayn iCloud? Halkan waxaan kuugu muujineynaa dhowr tallaabo sida loo kiciyo ikhtiyaarka adoo adeegsanaya Mail for macOS
Sida loo beddelo goobta feylasha laga soo dejiyo iTunes
Ma rabtaa inaad bedesho goobta ay ku jiraan dhamaan soo dejinta aad ku sameyso iTunes? Waxaan ku sharaxeynaa sida loo sameeyo talaabooyin aad u fudud
Sida dib loogu cabiri karo sawirro badan oo la socda Falanqeynta
Ikhtiyaar kale oo Horudhac ah ayaa na siiya, waxaan ku aragnaa suurtagalnimada inaan awoodno inaan beddelno cabbirka sawirrada si wadajir ah.
Laga soo bilaabo Apple TV waxaad sidoo kale maamuli kartaa rukunka waana sida loo sameeyo
Ma ogtahay in rukhsadaha aad qandaraaska kuhesho Apple ID-kaaga sidoo kale lagu maamuli karo Apple TV? Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida ay u fududahay
Maxaan u arki kari waayey qaar ka mid ah macaamiishayda iTunes
Aad ayey suurtogal u tahay inaadan ku arki doonin dhammaan rukunkaaga iTunes. Waxaan kuu sheegeynaa waxa sababi kara inaad ku aragtid liiskaaga
Sida loo soo dejiyo nuqul ka mid ah dhammaan macluumaadka Apple ogyahay adiga kugu saabsan
Ma rabtaa inaad kala soo baxdo xogta ay Apple kaa uruuriso adiga? Waxaan kuu sharxeynaa, talaabo talaabo ah, sida aad u socon laheyd
Sida loo joojiyo otocorrect macOS
In kabadan hal munaasabad, curyaaminta macOS autocorrect waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu fiican marka sixirku uusan joojinayn wax ka beddelka wax kasta oo aan qoreyno.
Sida wax looga beddelo rukummada Apple ee Mac-kaaga adoo adeegsanaya iTunes
Ma rabtaa inaad barato sida loo maareeyo rukummada iTunes? Halkan waxaan kaaga tagnay cashar yar oo kuu ogolaanaya inaad ogaato inta rukhsad ee wali shaqeyneysa, sida looga baxo rukhsadda ama sida loo cusbooneysiiyo
Sida loo helo tirada taxanaha ah ee Mac
Ogaanshaha tirada taxanaha ah ee Mac-du waxay noo oggolaan kartaa inaan si dhakhso leh u ogaanno oo keliya xaaladda dammaanadda Mac-da, laakiin sidoo kale waxay u oggolaaneysaa Apple inay ogaato dhammaan tilmaamaha qalabkeenna.
Baro muuqaalka si aad uga tagto warqad macOS ah xagga hore
Baro sida loogu muujiyo qoraalka jiida hore si marwalba uu u muuqdo ama u qoro. Waxaa sidoo kale lagu sameyn karaa qoraallo badan isla waqtigaas.
Sida ugu dhakhsaha badan looga furo xiriiriyeyaasha Tooska
Iftiimintu waa aalad awood badan oo kuu oggolaanaysa inaad si raaxo leh ula shaqeysid Mac-gaaga. Markan waxaan kuu sharraxeynaa sida ugu dhakhsaha badan ee loo furo xiriiriyeyaasha aaladdaas
Sida loo demiyo loona tirtiro cookies-ka ku jira Safari
Haddii aad ka daashay aragtida sida biraawsarkaaga uu wax badan uga ogaanayo taariikhda raadintaada sidaad adigu u ogaatay, waxaa la gaadhay waqtigii laga tirtiri lahaa cookies-ka barowsarkayaga.
macOS waxay leedahay ikhtiyaar calaamadeyn Sawir laakiin waa naafo tahay
Ikhtiyaarka 'Dialing iOS' wuxuu saaran yahay macOS laakiin waa naafo yahay. Si aad u dhaqaajiso, waa inaad tagtaa Nidaamka Kordhinta Nidaamyada.
Sida loo qariyo IP
Waxaan kuu soo bandhigeynaa waxyaabo kale oo ka duwan si aad IP ugu qariso Mac. Fursadahaani waxay ku marayaan adoo adeegsanaya wakiillada, VPN-yada ama daalacashada internetka oo leh xulashooyin xiiso leh oo kuu oggolaanaya inaad si gaar ah u dhex maraatid oo aan raad lagaa tagin.
Haddii aad ka mid tahay kuwa si badheedh ah u beddela amarka miisaska, ogow inaad ka fogaan karto
Mid ka mid ah dhibaatooyinka uu shaqaaleeye saaka iga kiciyey amarka miisaska ...
Sida Java loogu rakibo macOS High Sierra
Noocyadi udambeeyay ee macOS, Apple ayaa meesha ka saartay taageerada Java asal ahaan, sidaa darteed waa inaan tagnaa Oracle websaydh si aan u soo dejino barnaamijka Java si loogu ciyaaro waxyaabaha ku qoran luqaddan.
Soo hel lambarka sirta ah ee Wi-Fi adigoo u mahadcelinaya barnaamijka Keychains ee ku yaal Mac-gaaga
Casharro ku saabsan sida loo soo cesho lambarka sirta ah ee Wi-Fi iyadoo la adeegsanayo barnaamijka macOS Keychains dhowr tallaabo oo fudud
Si dhakhso leh u ogaato furaha kumbuyuutarka ee barnaamijyada aad jeceshahay
Waad ku mahadsan tahay codsigan yar, waxaan si dhakhso leh ku ogaan karnaa kumbuyuutarrada gaabiyo barnaamij kasta oo aan ku rakibnay Mac-keena ayaa na siiya.
Chrome 66 waxay noo ogolaaneysaa inaan dhoofino furaha sirta ah
Nooca ugu dambeeya ee loo yaqaan 'Chrome for Mac' wuxuu noo ogolaanayaa inaan dhoofino dhammaan furayaasha sirta ah ee aan ku keydinnay biraawsarkaya faylka qaabka .csv
Sida si toos ah loogu hagaajiyo iftiinka kumbuyuutarka Mac
Maanta waxaan arki doonaa sida aan u hagaajin karno iftiinka kumbuyuutarka ee MacBook Pro, MacBook Air iyo ...
Sida loo nadiifiyo qayb ka mid ah taariikhda Safari ee Mac
Haddii munaasabad kasto lagugu qasbo inaad tirtirto oo kaliya qeyb kamid ah taariikhda ama bogag gaar ah, maqaalkan waxaan ku tusaynaa sida aad u sameyn karto adigoon gebi ahaanba tirtirin.
Sida loo tirtiro font-ka Mac
Shalay waxaan aragnay habka aan ugu shaqeyn karno font-ka Mac-geyga lamaanaha ...
Macbook trackpad ma shaqeynayo markaad leedahay jiir dibadeed? Halkan xalka
Miyuu barnaamijka 'MacBook' ee ku dhex jira trackpad-ka uu joojiyaa inuu shaqeeyo marka aad isku xireyso jiir wireless ama trackpad? Xalku waa kan
Sida loogu badalo midab PDF midab madow iyo cadaan ama culeys-saaris ah oo ku yaal Mac iyadoo aan lahayn barnaamijyo dhinac saddexaad ah
Haddii aan dooneyno inaan yareyno cabbirka dokumentiga PDF oo ay ku jiraan sawirro, xalka ugu fiican ayaa ah in loo beddelo madow iyo caddaan.
Si fudud u jooji font ku qoran Mac-gaaga
Ku rakibidda font-ka Mac-da waa wax aan si fudud ugu samayn karno kombuyuutarkayaga oo lagu daro ...
Ku dar isboorti cusub barnaamijka Apple Watch Workout
Sida loogu daro isboorti badan arjiga tababarka ee Apple Watch si ay u qabato hawl ka duwan kuwa horey loo sii dejiyey isla markaana aad u hagaajiso tababarkaaga.
Sida loogu isticmaalo kombiyuutar kale CD ama DVD drive Mac-gaaga
Ma rabtaa inaad ogaato sida loo isticmaalo kombiyuutar kale CD ama DVD-ga Mac-gaaga? Halkan waxaan ku sharaxeynaa talaabada talaabo talaabo ah si aad u isticmaasho qalabka indhaha ee kombiyuutar kale
Sida loo kala sooco faylasha Finder iyadoo loo eegayo kordhintooda
macOS waxay na siisaa suurtagalnimada inaan ku dalbanno waxyaabaha ku jira faylkeena kooxdu siyaabo kala duwan. Maqaalkani waxaan ku tusineynaa sida loogu dalbado iyada oo loo eegayo codsigooda / kordhinta.
Sida loogu daro foomka Dukumintiyada Dhawaan Mac Dock
Ma rabtaa inaad ku hesho toobiye macOS Dock dukumintiyadaadii ugu dambeeyay, codsiyadaagii dhowaa, iwm. Waxaan ku tusineynaa sida loogu awoodo Terminal-ka
Sidee looga tirtirayaa xogtayada Facebook macOS
Haddii aad u malaynaysid in la gaadhay wakhtigii la siin lahaa xog bixiye Facebook, waxaad ku bilaabi kartaa adiga oo ka saaraya raad kasta oo Facebook ku yaal Mac-gaaga adoo samaynaya tallaabooyinka soo socda.
Sida loo raadiyo Taariikhda Safari ee Mac
Sameynta raadinta taariikhda Safari waa nidaam naga hor istaagi doona inaan si muuqaal ah u hubino bogagga aan si toos ah u booqannay taariikhda.
Sida loogu daro ama looga saaro ereyada Qaamuuska Mac ee lagu dhisay
Marabtaa inaad gacantaada wax uga beddesho qaamuuska Mac-ga ah ee Mac-ga ah? Waa kuwan laba siyaabood oo loo sameeyo: iyada oo loo marayo barnaamijyada ama faylka ilaha
Way cadahay in daruurtu ay tahay qayb muhiim ah maalin ilaa maalin adeegsadayaasha Apple iyo ...
Cashar barasho si loo ogaado sida loo beddelo luqadda Mac ee loo adeegsaday macOS. Haddii aad ka iibsatay kombuyuutarkaaga Apple dibadda ama aad safreyso oo aad rabto inaad beddesho luqadda nidaamka ama kumbuyuutarka, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo tallaabo tallaabo.
Markii aan qabsanno Mac-geyga ama aan aragno horudhac sawir ah adoo riixaya barta bannaan, ...
Astaamaha qaar ee trackpad-ka oo leh Force Touch ee barnaamijyada Apple
Force Touch waxaa laga hirgaliyay MacBooks ilaa sanadkii 2015 waqtigaanna wax yar ayaa ...
Sida loogu kala saaro calaamadeena alifbeeto ahaan Safari
Nooca ugu dambeeyay ee macOS High Sierra, nambarkiisa 10.13.4, wuxuu noo ogolaanayaa inaan kala-soocista calaamadaha alphabet ahaan, si ay aad ugu fududaato helitaanka kuwa aan raadineyno.
Sida si toos ah loogu tirtiro faylasha ZIP-ka Mac ka dib soo saarista
Miyaad u maleyneysaa inaad waqti badan ku bixineyso tirtirka dhammaan faylasha ZIP mar aad furayso? Otteji ficilkan oo u dir feylka isku-buufsan warqadda ka dib soo saarista
Sidee loo dejiyaa cabbirka ugu yar ee ugu yar ee Safari ee macOS
Miyaad u adeegsaneysaa Safari biraawsarkaaga shabakadda ee caadiga ah? Ma leedahay dhibaatooyin xagga aragtida ah? Taladan waxaan kaa caawinaynaa inaad soo rogto xaddiga cabbirka xuruufta
Sida loo sameeyo kordhinta faylkaaga Mac markasta la arki karo
Miyaad ku mashquulsan tahay fayl aad u badan oo ku saabsan Mac-gaaga oo aadan garanaynin dhamaadka kordhinta faylka ay tahay inaad ku shaqeysid? Halkan waxaan kaaga tagnay cashar si aad uhesho kordhinta faylashaada si joogto ah u muuqato
Sida loo qaabeeyo biilka mobilada habka lacag bixinta ee barnaamijyada wax ku iibsashada Mac
Ma rabtaa in dhammaan iTunes-kaaga, iBooks-ka, App Store, Mac App Store ama Apple Music iibsadaan laguugu soo dallaco biilkaaga moobaylka? Waxaan kuu daynay cashar si aad uga samayso isbedelka ka yimid Mac
Sida loo muujiyo liiska daabacan ee la balaariyay markii ugu horeysay
Haddii aad rabto inaad marin u hesho qaybta daabacan ee la ballaadhiyay asal ahaan, qodobkan waxaan ku tusaynaa sida aan si dhakhso leh ugu qaban karno dhib la'aan.
Dib u bilow barnaamijkaaga 'Bluetooth' ee 'Mac' haddii aad leedahay dhibaatooyin isku xirnaanta
Haddii duruufaha ku xiran ee Mac ay dhibaatooyin qabaan, dhibaatada waxaa lagu xallin karaa iyadoo dib loo cusbooneysiiyo moduleka Bluetooth. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo, iyo sidoo kale shaqooyinka kale
Abaabulaan kalandarkaaga midabyo si aad uga dhigto mid maalin fudud kuu fudud
Jadwalka taariikhda loogu talagalay macOS, iyo sidoo kale jadwalka iCloud, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad midabyo kala duwan u xilsaarto mid kasta oo kalandarka ah, si ay uga dhigto mid fudud in la kala saaro.
Ku habeyn Mac-gaaga adoo adeegsanaya sawirada WWDC ee 2018-ka ah ee waxyooday
Haddii aad rabto inaad kooxdaada shaqsi ahaaneed uga dhigto waraaqo derbiyeed cusub oo lagu dhiirrigeliyey WWDC 2018, qodobkan waxaan ku tusinaynaa illaa 16 moodal oo kala duwan.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa faylasha DMG ay yihiin? Gali oo soo hel sida loo furo noocyada faylasha macOS iyo codsiyada aad u baahan tahay inaad ku socodsiiso nidaamyada kale ee hawlgalka sida Windows. Haddii aad rabto inaad ogaato u dhiganta kordhinta ISO ee Windows iyo qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida aan ula shaqeyn karno.
HomeKit: sii isticmaaleyaasha kale rukhsad ay ku heli karaan meel fog
Kani waa qaybtii labaad kadib casharkii aan shalay kabilaabanay sida looqeybinayo koontaroolka guriga ...
Sida loo rakibo Kodi Mac
Ma rabtaa inaad ku isticmaasho Kodi Mac-gaaga si aad ugu ciyaarto fiidiyowyo, muusig ama sawirro? Waxaan kuu daynay tilmaan si aad ugu rakibto kumbuyuutarkaaga Apple
Homekit: sida loo qaabeeyo bartamaha guriga
Xaaladdan oo kale waxaan ku tusi doonnaa ikhtiyaarka u qaabeynta bartamaha guriga oo leh kan afraad ee Apple TV ...
Sida loo beddelo magaca asalka ah ee shaashadda macOS
Magaca asalka ah ee macOS u siinayo shaashadahaaga kuma qancinaayo? Halkan waxaan ku sharraxeynaa sida loogu beddelo magaca aad adigu aad xiiseyneyso
Taasi waa sida ay u fududahay inaad kula wadaagto sawiradaada shabakadaha bulshada Mac-gaaga
Marar badan waxaan nolosheena ku adkeyneynaa codsiyada dhinac saddexaad si aan u qabanno howlo si toos ah loo qaban karo iyo ...
Sida loo dejiyo xaddidaadaha xakameynta waalidka ee Mac
Ku darida xakamaynta waalidka ee Macs waxay muhiim u tahay kiisaska haysashada kuwa yaryar ee guriga jooga iyo ...
Sida loo qandaraaslo boos ka badan iCloud oo laga helo Mac
Ma u baahan tahay meel bannaan oo dheeraad ah oo ku taal iCloud oo ma ogid sida loo kordhiyo qorshahaaga? Waxaan kuu sharraxeynaa, talaabo talaabo ah, sida looga sameeyo Mac
Sida loo helo dhammaan barnaamijyada 32-bit lagu rakibay Mac-keena
Ogaanshaha haddii codsiyada aan ku rakibnay Mac-geena ay la jaan qaadayaan 64 qaybood ayaa noo oggolaan doonta inaan qorsheyno haddii aan wax ka beddeleyno barnaamijka nooca soo socda ee macOS, oo ah nooc aan la jaan qaadi karin codsiyada 32-bit.
Hubi haddii MacBook-kaaga uu taageerayo furitaanka adoo adeegsanaya Apple Watch
Xaqiiqdii dhammaanteen waan ognahay suurtagalnimada furitaanka MacBook-keena illaa Apple Watch, laakiin maahan dhammaan Mac-yada ...
Kordhi madaxbanaanida Mac-gaaga leh barnaamijka MyAppNap
Waxaan soo bandhigeynaa arjiga wali kujira mudadii tijaabada MyAppNap, oo aad ku keydin karto batteriga Mac adigoo curyaaminaya barnaamijyada xagga asalka ah
Sida loo yareeyo cabbirka maktabadda sawirada ee 'iCloud Photo Library' oo ka socota Mac-keena
Xaqiiqdi inbadan oo idinka mid ah ayaa soo martay fariinta ah inaadan boos kuheynin iCloud si aad u keydisaan ...
Raadi feylal nuqul ah oo ku jira iTunes 12
Shaqada lagu soo bandhigayo walxaha nuqullada ah waxay ku jirtay iTunes dhowr nooc, laakiin iTunes 12 way ka qarsoon tahay. Ogow sida loo helo.
4 siyaabood oo lagu xusho faylasha Mac
Xulashada feylasha ku jira macOS waa geedi socod aad u fudud, waa geedi socod aan ku sameyn karno habab kala duwan iyadoo ku xiran baahiyaheena.
Ku milmaan feylasha ku jira 'macOS' hawl qarsoon "Badbaadinta"
Isku dar faylasha inta u dhexeysa fayl, adoo dooranaya ikhtiyaarka ku habboon baahiyaheena. Waan ognahay shaqada qarsoon "Badbaadso"
Sida loogu beddelo astaanta asalka ah ee faylasha ama faylalka sawirrada
Beddelida astaanta mataleysa galka ama feylasha aan sida caadiga ah ugu adeegsanno sawir waa geedi socod aad u fudud oo si dhib leh ugu baahan aqoon.
Sida loo soo bandhigo dhammaan dhacdooyinka "Kalandarka" ee liistada keliya
Ma rabtaa inaad ku aragto dhammaan dhacdooyinka jadwalkaaga taariikhda? Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 'Calendar Calendar' waxaad ku sameyn kartaa si fudud
Sida looga tirtiro waxyaabaha qashinka si otomaatig ah 30 maalmood kadib
Tani waa shaqeyn laga heli karo Raadiyaha muddo dheer waxayna waxtar weyn u yeelan kartaa adeegsadayaashaas ...
Ma ogtahay waxa kooneyaasha kulul ku jiraan macOS? Maanta waxaan sharxeynaa waxa ay yihiin iyo sida loo qaabeeyo
Tani waa mid kale oo ka mid ah shaqooyinka xiisaha leh ee ay bixiso macOS OS si ay si dhaqso ah ugu helaan fursadaha ...
Sida Loogu Beddelo Badhanka Badhanka, Menu, Daaqad, iyo Midabbada Lagu Tilmaamo Mac-gaaga
Tani waa wax aan ahayn wax cusub uguna macquulsan waxa weeye inaad horeyba u taqaanay sida loo badalo midabka ama ...
Sida loo xafido fayl dusha sare ee macOS Finder marka magac lagu kala soocayo
Ma rabtaa in faylalkaaga Finder-ku had iyo jeer laga helo xagga sare? Raac talaabooyinkan fudud waxaadna ku dalban kartaa waxaad jeceshahay
Sida dib loogulaabo boodhadhka Mac-gaaga
Kombiyuutarrada loo yaqaan 'Mac clipboard' si fiican uma shaqeynayaan Halkan waxaan kaaga tagnay dhowr siyaabood si aad dib ugu bilaabi karto adigoon u baahnayn inaad dib u bilowdo barnaamijka 'Mac'
Sida loo qaabeeyo Dock si dhakhso badan loo qariyo
Haddii gaabiska uu Dock-ka lagu soo bandhigo markii la qarsoonayo uu sii xumaanayo, amarkan, waan dedejin karnaa muuqaalkiisa.
Sida si toos ah loogu qariyo Dock-ka ku yaal Mac
Si otomaatig ah u qarin ama u muuji Codsiyada Dock-ka Mac-gu waa geedi socod aad u fudud, waa nidaam aan hoos ku faahfaahin doonno.
Sida loo abuuro jawaabaha otomaatiga ah ee boostada loogu talagalay macOS
Ma u baahan tahay inaad dejiso jawaabaha otomaatiga ah ee sanduuqaaga? Ma isticmaashaa macOS Mail? Halkan waxaan kuugu sheegeynaa talaabo talaabo sida loo sameeyo
Maxaan samayn karnaa haddii kumbuyuutarkayagu leeyahay mid ama in ka badan oo furayaal ah oo aan ka jawaabi karin?
Koodhadhka cusubi way fududahay in lagu ogaado haddii taabashada lama huraanka ah runtii la samaynayo si kuwan ...
Waa maxay Adeegga Shabakadda ee macOS?
Dhamaan kuwa aan xitaa garanaynin meesha ay utilitykani ku jirto nidaamkayaga hawlgalka ee macOS, waanu kuu sheegi doonaa ...
Dami ama beddel dardaaranka "Neefsashada" ee ku jira Apple Watch-kaaga
Apple Watch waxaa lagu dhajiyay inuu yahay mid ka mid ah wax soo saarka sanadihii ugu dambeeyay ee Apple waana sababta ...
Sida loo yareeyo miisaanka faylka PDF ee ku jira Mac
Ma rabtaa inaad yareyso cabirka dokumentiga PDF ee ku jira macOS? Waxaad si fudud ugu haysataa barnaamijka Falanqeynta ee ku soo beegmaya heerka macOS
Sida loo adeegsado Boot Manager-ka macOS
Marka hore, waxaan dhihi doonnaa haddii aad haysatid qalab kale oo boot ah oo leh nidaam hawlgal oo u dhigma Mac, ...
Si aad ugu bedesho Aqoonsiga Apple ee HomePod waxaad u baahan doontaa inaad dib u dejiso
Casharro ku saabsan sida loo beddelo Aqoonsiga Apple ee HomePod. Si tan loo sameeyo waa inaan dib uga dejisanaa afhayeenka Apple arjiga ama HomePod laftiisa.
Sida loogu daro ereyga sirta ah ee hal-adeegsiga ah 'Mac'
Kaliya Talaadadii la soo dhaafay waxaan aragnay sida aan ugu dari karno erey sir ah Mac si aan uga hortagno bilowga ...
Kici qufulka aad Mac haddii ay dhacdo in lumo ama xatooyo
Waxay umuuqataa wax qariib ah, laakiin talobixinta ugu horeysa ee Apple lafteeda ama xitaa mas'uuliyiinta (kuwaas oo aad u yaqaan ...
Sidee loogu daraa lambarka sirta ee qalabka 'Mac'
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan ogaano waa waxa loola jeedo in lagu daro lambarka sirta ah ee Mac. Tani waa wax ...
Maxaan u furi waayey setinka Nidaamka aad doorbideyso?
Mid ka mid ah su'aalaha dadka adeegsada Mac ay noo waydiiyaan waqti ka waqti ayaa ah midka aad ku hayso ...
Ka baro wax badan oo ku saabsan HomePod oo leh casharro fiidiyoow ah oo Apple ah
Apple waxay soo gelisay fiidiyowyo kanaalkeeda YouTube-ka ah oo ku saabsan Sida loo isticmaalo Siri si ay ula falgalaan shaqada Play Music, Adeegsiga HomePod ee kontaroolada taabashada, si looga faa'iideysto dhammaan howlaheeda iyo, Qaabeynta kala duwan ee aan ka helno HomePod.
Ma leedahay 2 kormeere oo loogu talagalay Mac? Fur codsiyada ku yaal kormeeraha aad horay u dhiibtay
Oo caadi ahaan waa wax aan caadi ahayn in guriga lagu haysto laba kormeerayaal si ay ula shaqeeyaan Mac, laakiin waa ...
Sida loo waafajiyo laba shaashad oo ku xiran Mac-da si aan u jeclaanno
Waxyaabaha loo adeegsanayo laba shaashadood oo isku xiran oo ku jira Mac, ama kormeeraha dibedda ee MacBook-keena ama si toos ah ugu xiran ...
Ku dar dhul-qofeed sawirradaada abka Sawirada
Casharro ku saabsan sida loogu daro juqraafinta sawirrada ka maqan arjiga Sawirada. Waxaan adeegsan doonnaa album casri ah.
Nuqul oo dhaji aan ka shaqeynaynin Mac? Waxaan ku barinaa inaad xalliso
Xalka si loo soo celiyo nuqulka iyo dhajinta shaqada macOS. Waa inaan dib u soo celino hawsha, ama ha ahaato kormeeraha waxqabadka ama amar ka imanaya xarunta.
Sida loo isticmaalo kumbuyuutarka Windows oo leh Mac
Ma rabtaa inaad isticmaasho kumbuyuutar Windows ah oo ku yaal Mac? Halkan waxaan ku siineynaa talaabooyinka si isbadal yar uu kula shaqeeyo kumbuyuutarkaaga Apple
Sidee si fudud loogu abuuraa saxiixaaga elektarooniga ah ee macOS?
Maalmo ka hor waxaan u baahday inaan saxeexo dukumenti ku saabsan Mac-kayga iyo sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo marka loo eego si toos ah ...
Sida loogu beddelo lambarka sirta ah isticmaalaha "root" ee ku jira Mac
Ma dooneysaa inaad isticmaasho macruufka xididka weyn ee macOS laakiin ma xasuusan karo erayga sirta ah? Teranquilo, halkan waxaan kaaga tagnay cashar si aad ugu beddasho mid cusub
Siyaabaha loo xiro barnaamijyo badan oo macOS ah isla waqtigaas
Casharro ku saabsan sida loo xiro dhowr codsi isla mar ahaantaana laga bilaabo macOS ee nidaam kasta oo hawlgal ah, haddii codsi la xannibay.
Soo bixi baarka calaamadaha leh toobiye kumbuyuutar ee Safari iyo toobiyeyaal kale oo fiican
Waxaan ku jirnaa waqti muhiim ah marka la eego imaatinka isticmaaleyaasha cusub ee dunida Mac waana taas ...
Haddii aad had iyo jeer dooneysay inaad awood u yeelato inaad AirDrop ka isticmaasho Mac's Dock, maqaalkani wuxuu ku tusi doonaa sida aan ugu dhaqaajin karno shaqadan si deg deg ah oo fudud.
Ma rabtaa qaabka shaashadahaaga shaashadda ah ee 'Mac' inay u beddelaan qaabka si otomaatig ah? Ma rabtaa inaad bedesho dariiqa aad ku nooshahay? Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida
Sida loo helo emojis isla markaaba adoo adeegsanaya toobiye kumbuyuutar
Kani waa toobiye kumbuyuutar oo adeegsadayaal badan oo macOS ah ay adeegsanayeen muddo dheer, laakiin iyagu way na raacaan ...
Dhibaatooyinka qabatinka ee iOS waxay leeyihiin xal aad u fudud oo ku jira macOS
Dhibaatooyinka balwadda ee maalgashadayaasha qaar ay ka muujinayaan macruufka waxay leeyihiin xal aad u fudud nidaamka hawlgalka Apple ee Mac.
Haddii aad dhibaatooyin xagga shaqada ah ku haysato iTunes-ka iyo waxyaabaha aad soo degsatay oo aad hore u soo iibsatay, qodobkan waxaan ku tusi doonaa sida ugu fudud ee loo xalliyo.
Tani waa wax inta badan ku soo noqnoqda waxaan ka imid Mac waana waana waqti ka waqti inaan ku jeclaano ...
Sida loogu daro iCloud Drive meesha ugu saraysa ee Mac iyo marinka laga helo.
Cashar ku qaad si aad uhesho galka 'iCloud Drive' oo laga heli karo Dock of our Mac isla markaana si dhakhso leh u heli kara daruurta Apple
Sida looga saaro autoplay Safari 11
Tani waa wax nalagu waydiiyo marwalba waxaan ka imid Mac jawaabtuna waa mid aad ufudud, mahadsanid ...
Sida dib loogu dhigo Mac Keychain kombuyuutarkaaga
Muuqaalkani wuxuu u fiicnaan karaa kuwa adeegsada ee Mac-du ay sii weydineyso furaha Keychain ...
Sideen u qiyaasi karnaa baytariga MacBook-keena
Tani waxay noqon kartaa waddo si dhab ah mar labaad loogu arko boqolleyda batroolka aan uga tagnay MacBook-keena, ...
Ku shaqeynta kaliya kumbuyuutarka waa macquul Mac-ga. Waxaan ku baraynaa tuuryo kumbuyuutar oo kala duwan oo kuu fududeyn doona maalintaada
Baro sida loo maamulo cusbooneysiinta macOS High Sierra iyo barnaamijyada rakibay, si toos ah ama gacan ah.
Sida loo joojiyo otomaatigga fiidiyaha tooska ah ee loo yaqaan 'Chrome'
Mid ka mid ah xumaanta ugu weyn ee bogagga internetka qaarkood ay ku sameeyaan internetka ayaa ah ku-soo-celinta tooska ah ee tooska ah ee fiidiyowyada iyada oo aan la weydiinin isticmaalaha
Sida loo xiro Mac-gaaga si dhaqso leh iskudhaf muhiim ah
Gawaarida kumbuyuutarka waa saaxiibadeena waxayna sidoo kale noo oggolaadaan inaan si dhakhso leh u deminno Max-keena annaga oo aan u adeegsanin menus.
Sida loo isticmaalo 'Raadi iPhone-kayga' si loo helo AirPods
Haddii aad lumiso AirPod-kaaga xaalad kasta, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad hesho: isticmaal hawsha "Find my iPhone" ee ka socota Mac ama iPhone / iPad
Iskudhafyada Muhiimka ah Waxaad Isticmaali Kartaa Markuu Macku Bilaabayo
Ma ogtahay inaad adiguba heli karto howlaha marka Mac-gaagu bilaabmayo? Halkan waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa isku-darka furaha
Sida loogu saxiixo dukumiinti Mac Falanqaynta
Ma u baahan tahay inaad ku saxeexdo dukumiintiyada iyada oo loo marayo Mac-gaaga? Halkan waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo barnaamijka "Horudhaca" ee aad ku haysato dhammaan kombiyuutarrada Apple
Sideen ku kaydsan karaa Apple Watch-kayga? Tani waa mid ka mid ah su'aalahaas inta badan nala weydiiyo ...
Haddii aad leedahay APFS, samee shaashad nidaamkaaga ah adigoon u adeegsan Waqtiga Mashiinka
APFS iyo macOS High Sierra waxay keeneysaa ikhtiyaarka lagu sameeyo shaashad nidaamka ah. Casharkaan waxaan ku tusineynaa sida
Sida loo nadiifiyo kaydinta DNS ee macOS High Sierra
Marka aan u gudubno bedelida DNS-ka Mac-da, waa inaan, haa ama haa, tirtirnaa dhammaan keydadkii hore ee DNS haddii aan rabno inay shaqeeyaan
Sida loogu isticmaalo MacBook ama MacBook Pro qaab shaashad xiran
Astaantani ma noqon karto baahida inteena badan, laakiin haddii ay jiraan isticmaaleyaal sida macallimiinta ...
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ay adeegsadayaasha badan ee macOS na weydiiyaan maalintii oo dhan waana ...
Sida loo tiriyo ereyada TextEdit
TextEdit waa soo saaraha ereyga bilaashka ah ee kumbuyuutarrada Mac.Hase yeeshee, waxay u baahan yihiin erey-celin. Halkan waxaan ku xallinaynaa
Sida loo isticmaalo barnaamijka farriimaha adiga oo aan furin barnaamijka Mac
Waxaan hubnaa in inbadan oo idinka mid ah aysan isticmaaleynin dalabkii dhambaalada Apple isla markaana qeyb ahaan idinkaa iska leh ...
Sida loo demiyo miiraha spam ee macOS High Sierra
Codsiga Boostada wuxuu na siinayaa ikhtiyaarka aan ku dhaqaajineyno ama ku shaqeyneyno shaandhada spam si loo shaandheeyo emaylka SPAM
Haddii shil ahaan galka Downloads-ka uu uga dhammaaday Dock-keena, maqaalkan waxaad ku heli doontaa hab deg deg ah oo fudud oo aad ku soo kaban karto.
Waxaan ku xasuusinaynaa sida ugu fudud ee magaca Mac-gaaga loogu beddelo qaab fudud
Waxaan hubnaa in qaar badan oo ka mid ah kuwa hadda jooga ay sifiican u yaqaanaan sida loo sameeyo badalkan magacaaga ...
Miyaad ka fikireysaa inaad ku iibiso MacBook Pro-gaaga Touch Bar? Apple waxay kugula talineysaa talaabadan hore
Talo-bixin fudud oo ka socota Apple ka hor intaadan iibinin MacBook-gaaga 'Touch Bar' oo gebi ahaanba ka tirtir macluumaadka baarka
Sida loo beddelo lambarkaaga sirta ah ee furaha login
Casharradan yar waa wax waxtar u yeelan kara dhammaan kuwa isticmaala ee uusan Mac ka tegin ...
Sida loogu beddelo daboolka buugaagtaada buugaagta 'iBooks'
Beddelida daboolida buugaagta aan ku keydinno Mac iBooks waa wax aad u fudud. Waxaan ku baraynaa seddex talaabo sida loo badalo
Sida loo helo Siri oo leh kumbuyuutarrada gaaban ee macOS High Sierra
Siri maanta waa mid ka mid ah kaaliyeyaasha shaqsiyadeed ee ugu dhameystiran halkaas. Intaa waxaa dheer, waxaa laga helaa dhammaan ...
Sida loo kaydiyo cinwaan loo yaqaan 'URL's Dock'
Fursadaha aan ka heleyno Mac si aan u keydinno degel ama cinwaan gaar ah ayaa badan. Tan…
U qoondee sawirka warbaahinta bulshada xiriiradaada macOS High Sierra
Cashar ku saabsan sida sawirka loogu qoro shabakadaha bulshada: Facebook, Twitter, iwm. (badiyaa cusub) xiriiradaada macOS High Sierra
Sida looga tirtiro farriimaha hore barnaamijka macOS Mail
Tutorial si loo tirtiro emaylladii hore ee lagu soo diray arjiga Mail ee macOS High Sierra, iyadoo la adeegsanayo xeerarka shaqeynaya
Sida sawir looga soo raro barta 'Instagram' Mac 'iyadoo la adeegsanayo Safari
Ma u baahan tahay inaad ka soo dirto Mac-kaaga barta Instagram? Halkan waxaan ku faahfaahineynaa khiyaano - khiyaano - ah in laga sameeyo biraawsarka Safari
Sida looga helo dhammaan shaashadaha ku yaal Mac-keena Raadiyaha
Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa hab aad si dhakhso leh ugu hesho dhammaan shaashadaha ku keydsan Mac.
Sida loo rakibo barnaamijyada ka imanaya kuwa horumariya aan la aqoon macOS High Sierra
Nooca cusub ee macOS High Sierra nama ogolaanayo inaan ku rakibno codsiyada kuwa horumariya ee aan la aqoonsan sidoo kale. Waxaan ku tusineynaa sida loo joojiyo shaqadan
Sida loo isticmaalo cudurka Apple Diagnostics-ka ee loo yaqaan 'Macs' ayaa la iibiyay June 2013 wixii ka dambeeyay
Jimcihii la soo dhaafay waxaan soo bandhignay kii ugu horreeyay labadan cashar ee Apple laftiisu na tusayo inaan awood u yeelan karno ...
Sida loo adeegsado Imtixaanka Qalabka Apple ee Mac-yada la iibiyo illaa Juun 2013
Ugu horreyntii waxaan dhihi doonnaa waa tijaabadan Apple Hardware sidoo kale loo yaqaan AHT, waxaa ku jira xirmooyin baaritaanno ah ...
Haddii aad leedahay macOS server, cusbooneysiintaadu si dhakhso leh ayey ula socon doontaa macOS High Sierra
Laga soo bilaabo macOS High Sierra, haddii aan haysanno macOS Server, waxaan soo dejisan karnaa cusbooneysiin oo waxaan kula wadaagi karnaa kombuyuutarrada intiisa kale shabakaddayada.
La wadaag kaydintaada iCloud xubnaha qoyskaaga macOS High Sierra
MacOS High Sierra waxay noo ogolaaneysaa inaan la wadaagno xubnaheena intiisa kale xogta xubnaha
Tani waa ikhtiyaar ay heli karaan adeegsadayaasha haysta nooca 'macOS Sierra version' oo hadda lagu rakibay ama ...
HEVC, waa heerka cusub ee loogu talagay videoga MacOS High Sierra
Ugu dambeyntiina, shalay Apple waxay soo saartay nidaamka cusub ee Operating System, macOS High Sierra. Isaga oo ay weheliyaan, warar badan ...
Ma rabtaa inaad rakibto macOS High Sierra meel xoq ah? Waxaan wajaheynaa nidaamka cusub ee Apple ee loogu talagalay Macs iyo ...
Maanta oo dhan Apple waxay soo saartay Nidaam cusub oo Operating ah oo loogu talagalay kumbuyuutarrada, oo la soo bandhigay horay ...
Mac-gaagu ma wuxuu ku xirmayaa shabakad WiFi ah oo aadan rabin? Eeg sida loo hagaajiyo
Casharbarka iyo sida loo meeleeyo ahmiyadaha uu Mac-keena ku xirayo shabakadaha Wi-Fi iyo nadiifinta shabakadaha iyadoon la adeegsan.
Sida loo furo Apple Watch adigoon galin lambarka amniga
Sida iska cad, iyo inta badan intiinan gacmahaaga saarin madaxaaga, waa inaan dhahno waa ...
Sidee si fudud uga diidi kartaa iTunes-ka Mac-keena
Doorashadan ayaa noo oggolaaneysa inaan ka saarno oggolaanshaha iTunes kombuyuutarkeena si dhakhso leh oo fudud. Ma wax ...
Sida loo soo dejisto degel leh Safari for Mac
Waxaan ku tusineynaa sida aan si deg deg ah ugu soo dejisan karno boggaga internetka ee loo yaqaan 'Safari' oo ah qaab Webarchive si loogu wada hadlo dhammaan waxyaabaha ku jira.
Muraayad Mac ah oo loo yaqaan 'Smart TV'
Sida loo Daahfuriyo Mac OS X Shaashadda Samsung Smart TV iyada oo loo marayo AirPlay iyo Hababka Kale ee Kale. Iska iloow fiilooyinka si aad u sameyso muraayad soo bandhig
Ikhtiyaarrada si aad uga soo wareejiso sawirrada aaladda Android illaa Mac
Sidee loo wareejiyaa sawirada moobiilka illaa kombiyuutarka? Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan xulashooyinka jira si aad ugudubto faylasha laga soo wareejiyo Android illaa Mac si fudud oo dhaqso leh.
Sida loo rakibo Sierra-ka xoq
Tutorial si aad uga rakibto Sierra ka xoq, talaabo talaabo ah. Baro sida loo rakibo macOS 10.12 si fudud oo aan dhib lahayn halkan.
Sida loo qaabeeyo drive adag Mac
Waxaan ku tusineynaa sida loo qaabeeyo Mac iyo sida aad u tirtiri karto ama aad u qaabeyn karto wadid adag ama pendrive adigoo isticmaalaya qalabka 'disk macOS utility'.
Sidee looga saaraa animations-ka astaamaha dekedda markaan furano codsiyada
Maqaalkani waxaan ku tusi doonaa sida aan u joojin karno animations-ka astaamaha dekedda marka la furayo codsiyada
Sida loo demiyo Mac-dayada Terminal-ka
Thanks to codsiga Terminal-ka waxaan sidoo kale damin karnaa ama jadwal u xiri karnaa Mac-na si deg deg ah
Bogag lagu soo dejisto buugaag bilaash ah
Ma waxaad raadineysaa bogag aad ku soo dejiso buugaag bilaash ah? Gali oo soo hel boggaga ugu wanaagsan ee aad kala soo degsan karto buugaagta si fudud, dhaqso iyo bilaash ah!
Hagaaji 'kamarad aan ku xirnayn' qaladka OS X
Mac-gaagu ma aqoonsan yahay kaamirada websaydhka? Waxaan ku tusineynaa khiyaano aad ku dhaqaajineyso kamarada websaydhka ee 'Mac' oo aad ku xalliso qaladka "kamaradda aan ku xirnayn macOS
Ma hubo waxa la dooranayo, haddii kiiboodhka Isbaanishka ama Isbaanishka ISO ee ku jira Mac-gaaga? Raac casharradan si aad u ogaato dhammaan nashqadaha kumbuyuutarka ee ku yaal Mac
Talooyin si aad u weyneyso booskaaga diskiga ee Mac
Haddii aad haysato disk-fur buuxa oo ku saabsan Mac-gaaga, waxaannu ku siinaynaa talooyin taxane ah oo aad ku fasaxayso booska aad ku leedahay Mac si aad u kordhiso inta ugu badan ee suurtogalka ah.
U qaabe flash drive leh nidaamka FAT ama nidaamka exFAT
ExFAT ama NTFS? Baro sida loo qaabeeyo pendrive si looga shaqeeyo OSX iyo Windows oo leh nidaamka faylka FAT ama exFAT adoo adeegsanaya casharkaan
Ma rabtaa ringtones-ka iPhone? Soo ogow sida loo soo dejiyo ringtones bilaash ah ama loo sameeyo laxan si aad ugu raaxeysan karto heesaha sidii ringtone-ga
Dib u dejiso iPhone
Haddii aad iibineyso iPhone-kaaga ama ay tahay inaad u dirto adeegga farsamada, waxaan ku tusi doonaa sida loo tirtiro dhammaan waxyaabaha ku jira ama dib loogu soo celiyo iPhone-ka warshadda.
Sida loola wadaago muusikada iPhone-ka WhatsApp
Waxaan ku tusineynaa siyaabo kala duwan oo aad ugu wareejiso muusikada iPhone-ka WhatsApp ama qaababka aad ugu dirto MP3-ka WhatsApp si deg deg ah oo fudud.
Aaway maareeyihii hawsha?
Soo ogow sida loo isticmaalo kormeeraha dhaqdhaqaaqa ee OS X iyo sirta barnaamijkani ku qariyo Macs-ka u shaqeeya sidii maamule hawleed.
Sida looga saaro Siri MacBook Pro Touch Bar
Mid ka mid ah xulashooyinka aan ku leenahay Touch Bar ee cusub ee 'MacBook Pro' waa inuu dhaqaajiyo ...
Sida looga saaro xogta goobta sawirada aan wadaagno
Iyadoo loo marayo arjiga Sawirada waxaan si buuxda u tirtiri karnaa xogta goobta aan qabsanno.
Shaqo la socota otomaatiga si aad u cabbirtid sawiradaada
Maalmahan wax soo saarku waa wax aasaasi u ah dhamaanteen maadaama aan had iyo jeer saacado yar nahay maalintii ...
Sida sawir looga soo saaro faylka GIF ee leh Falanqeyn
Faylasha qaabka GIF waxay noqdeen habka ugu caamsan ee lagu muujiyo dareenkeena, anaga oo dhinac u dhaafnay ...
Sida looga hortago fiidiyowyadu inay si toos ah ugu ciyaaraan Safari
Xeeladdan yar, waxaan si dhakhso leh u joojineynaa fiidyowyada farxadda leh ee si toos ah loogu ciyaaro iyadoo loo marayo shabakadda Safari
Sida loogu beddelo feyl ay abuureen Muhiim u ah PowerPoint oo leh iCloud
Thanks to this trick fudud waxaan u rogi karnaa bandhigyada codsiga Muhiimka ah PowerPoint iyadoo la adeegsanayo iCloud
Gawaarida kumbuyuutarka ee loogu talagalay wareejinta tilmaamaha u dhexeeya qoraalka
Shalay waxaan aragnay iskudhaf yar oo ah noocyo kala duwan oo kumbuyuutar si loo awoodo in laga tirtiro ereyada, weedhaha iyo kuwa kale ...
Abuur PDF leh xulasho bogag ah, Falanqeynta Mac
Falanqeynta waxay leedahay tiro badan oo hawlo ah oo aynaan ogayn, laga yaabee inay tahay mid aan caqli gal ahayn. Aniga ahaan taasi waa ...
Gawaarida kumbuyuutarka si loo tirtiro ereyada ama weedh dhan oo ku taal macOS
Markaan wax ku qoreyno Mac waxaan heysanaa dhowr fursadood oo aan ku tirtiri karno eray ama weedh, waxaan sidoo kale ka sameyn karnaa dhanka bidix ...
Sida looga hortago dukumiintiyada iyo Desktop inay isku mid noqdaan iCloud
Casharbarida si aad udaarto oo aad iskasooxiso iskudhafka Desktop-ka iyo Dukumintiyada faylka adeega iCloud Drive
Ku balaadhi daaqad Kasta oo ay ku Xakamayso Howlgalka iyadoo xeeladan fudud
Xakamaynta howlgalka waa aalad wax soo saar sare leh. Baro sida loogu ballaariyo shaashad kasta shaashadan fudud.
Qaar ka mid ah dariiqooyinka kumbuyuutarka ee loo adeegsado Raadiyaha (II)
Qaybtan cusub ee kumbuyuutarrada loo adeegsado Raadiyaha waxaan ku heli karnaa waqti wanaagsan ...
Qaar ka mid ah dariiqooyinka kumbuyuutarka ee loo adeegsado Raadiyaha
Xaqiiqdii markii la soo saaray Macs cusub bishii la soo dhaafay isticmaaleyaal badan ayaa go'aansaday inay bixiyaan ...
Ma waxaad iibsanaysaa iMac 5k? Ogow farqiga u dhexeeya qaabka 2015 iyo 2017
Isbarbardhigga iMac 5k ee qaabka 2015, marka la barbar dhigo nooca 2017. Apple waxay bixisaa qiimo dhimis ku saabsan qaabka 2015. Qiimee qalabka aad xiiseyneyso
Waa maxay sababta "wakiilka sawirku" u cuno ilo aad u tiro badan iyo sida loo hagaajiyo
Wakiilka Sawirku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee adeegsada Mac. Ogow waxa soo saara oo go'aan ka gaadho haddii aad rabto inaad joojiso ama aad tirtirto.
Sida loo diyaariyo Night Shift-ka Mac-yada si toos ah loogu hawlgalo
Hawsha Wareejinta Habeenku waxay ku timid Macs-ka nooca 'macOS Sierra 10.12.4' waxayna u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay dejiyaan xuduudaha ...
Ma ogtahay in Siri ay iftiimin karto Mac-gaaga haddii aad weydiiso.
Mararka qaar shaqooyinkaas fudud ee aan ku qaban karno Siri gebi ahaanba lama yaqaanno maantana waxaan ka faalloonnaa mid ka mid ah ...
Sida loo qaabeeyo Mac si uu noogu akhriyo qoraalka macOS Sierra
Toddobaadkan waxaan aragnay codsi bilaash u ahaa waqti xaddidan oo si hufan ula xiriira ...
Sida loo helo goobta asalka ah ee toobiye (alias) ee Mac
Muujinta goobta asalka ahi waa hawl aad u fudud oo noo oggolaan doonta inaan galno faylka asalka ah ee macluumaadka lagu kaydiyo.
Sida loo abuuro toobiye (alias) Mac
Abuuritaanka magac-u-yaal codsi, fayl ama fayl Mac ah, ayaa na siinaya hab fudud oo aan ku helno ...
Tabaha lagu dalaco MacBook si aad u dhakhso badan
Waxaan ku tusineynaa talooyin yar-yar haddii aad rabto inaad ku buuxiso batterigaaga Macbook qaab ka dhakhso badan kan hadda jira.
Ka tirtir barnaamijyada ama barnaamijyada ku saabsan Mac-gaaga
Xulashada barnaamijyada si aad u awoodo inaad tirtirto codsiyada ama barnaamijyada OSX adigoon ka tagin raad hoos u dhigaya nidaamka waqtiga.